खोटाङमा एक सय ३७ जनाको आरडिटी रिपोर्ट नेगेटिभ | Nagarik News - Nepal Republic Media
खोटाङमा एक सय ३७ जनाको आरडिटी रिपोर्ट नेगेटिभ
११ जेष्ठ २०७७ ३ मिनेट पाठ
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका १ सय ३७ जनाको आरडिटि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । काठ्माण्डौं, उदयपुरको गाईघाट लगायतका ठाउँबाट आएका स्थानीयको आरडिटि टेष्ट गरिएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । गाउँपालिका आफैले १ सय ५० थान टेष्ट किट ल्याएर आईतबार आरडिटि परिक्षण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए ।
जिल्ला अस्पतालबाट डाक्टर तथा ल्यावका स्वास्थ्यकर्मी नआएपछि गाउँपालिकार्म कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमार्फत आरडिटि टेष्ट गरिएको हो । यसअघि गरिएको आरडिटि टेष्टमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका ४४ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको थियो ।
जिल्ला अस्पतालबाट आउने निश्चित गरिएका स्वास्थ्यकर्मी नआएपछि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीमार्फत आरडिटि टेष्ट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आरडिटिका लागि तीन दिन अगाडिका लागि तोकिएको मिति जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीकै कारण आईतबारका लागि सारिएकामा पुःन स्वास्थ्यकर्मी नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । ‘तीन दिन अगाडि नै आरडिटि गर्ने निश्चित गरेका थियौँ, मान्छे चौंरभरी आए, त्यत्तिकै फर्काइदियौँ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘आईतकारबालागि निश्चित गरेका थियौँ, १० बजे त आउन सक्दैनौं भन्ने जानकारी आएपछि गाउँपालिकाकै स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाएर टेष्ट गरेका हौँ ।’
अस्पतालबाट डाक्टर र ल्यावका स्वास्थ्यकर्मी जाने तयारी गरिएको भए पनि वर्षाका कारण सडक बिग्रेर गाडी चल्न नसक्दा आरडिटि गर्न जान नसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । गाडी खोजेर पठाउने प्रयत्न गरेको भए पनि वर्षाका गाडी हिँड्न नसकेपछि स्वास्थ्यकर्मी फर्किएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख पुण्यप्रसाद सिग्देलले बताए । जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. शैलेस श्रेष्ठले मगाइएको गाडी दिक्तेलको हाटडाँडाबाट अस्पतालसम्मै झर्न नसकेको बताए । गाडीमार्फत दिप्रुङ जाने अवस्था नभएपछि गाउँपालिकाकै स्वास्थ्यकर्मीलाई आरडिटि गर्न भनिएको डा. श्रेष्ठले बताए ।
हालसम्म जिल्लाका १० स्थानीय तहमा ५२० जनाको आरडिटि र १०५ जनाको पिसिआर परिक्षण भइसकेको छ । त्यसमध्ये साकेला गाउँपालिकाका दुई जनाको आरडिटि रिपोर्ट पोजिटिभ र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका एक जनाको पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको डा. श्रेष्ठले बताए । हालसम्म दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका ११३ जना, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ५८ जना, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका १८१ जना, साकेला गाउँपालिका ११८ जना, खोटेहाङ गाउँपालिकाका ६२ जना, जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका ५८ जना, रावाबेँसी गाउँपालिकाका २६ जना, बराहपोखरी गाउँपालिकाका २६ जना, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका १० जना र केपीलासगढी गाउँपालिकाका ५ जनाको आरडिटि गरिसकिएको छ ।
आरडिटिका लागि जिल्लाका दिप्रुङ गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले मात्र किट खरिद गरेर ल्याएको छ । साकेलाले दुई सय थान किट खरिद गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले बताए । आरडिटिको बिश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका भएपनि जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा आरडिटि परिक्षण जारी छ ।
जिल्लामा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट चार चरणमा ५५० थान र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट ५ सय थान आरडिटि किट आएको छ । यस्तै, बिभागबाट पिसिआरका लागि स्वाव संकलन गर्नेक्रममा उपयोग गरिने तीन चरणमा ६२५ थान भिटिएम प्राप्त भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सिग्देलले बताए ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ २०:५३ आइतबार
नेपालका लागी हुण्डाई मोटर्सको एक मात्र आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘क्लीक टु वुक’ सेवा सञ्चालन गरेको छ।
पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाले सबै वडामा स्वास्थ्यचौकी निर्माण शुरु गरेको छ। नगरपालिकाको एक वडा एक स्वास्थ्यचौकी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्यचौकी नभएका सात वटा वडामा निर्माणका लागि काम शुरु गरिएको हो।
विचरा यो छाउरो छिहिलिएको जस्तो छ । जाडो र भोकले रोइरहेको छ । यसलाई म पाल्न लान्छु । कसैले मेरो भनेर लिन आए भने बरु दिन्छु । मैले त यसको नाम राखिसकेंं ‘फुच्चे’ । म यसको स्याहार गर्न सक्छु । आमाले पनि पाल्न्न हुन्न भन्नू हुन्न । आजदेखि यो मेरो नया साथी बन्यो ’ भन्दै त्यो छाउरालाई बोकिन् ।
संवैधानिक आयोगमा समयमै पदाधिकारी र बजेट उपलव्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या
संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी र बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। सरकारले आयोगहरुलाई अधिकार पनि नदिने तथा पदाधिकारी र बजेट समेत समयमा नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको हो। आयोग गठन भएको लामो समय वित्दा समेत अझै धेरै आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु पूर्ति गरिएको छैन्।